Momba anay - Yantai Haicheng Sanitary Products Co., Ltd.
Yantai Haicheng Sanitary vokatra Co., Ltd.
Ny kojakoja ara-pitsaboana sy ny fitaovam-pitsaboana dia misy sarontava fiarovana (N95), saron-tava fitsaboana azo ampiasaina, saron-tava fandidiana ara-pitsaboana, akanjo fiarovana ara-pitsaboana, fitafiana mitoka-monina, akanjo fandidiana fitsaboana, solomaso pitsaboana, fonon-tanana fanadinana ara-batana, fonon-tanana fandidiana fitsaboana, basy maripana, sns.
Yantai Haicheng Sanitary vokatra Co., Ltd. dia miorina ao amin'ny Tanànan'i Yantai, faritanin'i Shandong, Sina, tanàna amoron-dranomasina tsara tarehy misy toe-javatra ara-jeografika ambony sy fitaterana mety.
Ny orinasa dia manam-pahaizana manokana amin'ny famonoana otrikaretina sy famokarana vokatra madio. Taorian'ny fampandrosoana 17 taona, dia nanjary isan-karazany ny otrikaretina sy ny antimicrobial agents, ny vokatra ho an'ny olon-dehibe, ny famonoana otrikaretina sy ny lamba famaohana taratasy ary ireo andiana mpamokatra vokatra hafa, fa koa ireo mpamatsy fitaovana ara-pitsaboana sy mpamatsy fitaovana matihanina. manana atrikasa fanadiovana GMP 100000 kilasy sy fitaovana famokarana mandeha ho azy izahay. Izy io koa dia manana fahazoan-dàlana hamokatra, lisansa fandraharahana ary fanamarinana fanamarinana tanteraka ny vokatra isan-karazany. Afaka manome OEM sy ODM izahay, ho an'ireo mpividy manerantany hiasa hiatrehana ny filan'ny olona eran'izao tontolo izao amin'ny lafiny rehetra amin'ny vokatra ara-pahasalamana amin'ny fiainany andavanandro.
Amin'izao fotoana izao, malaza ny karazan-karazan-javamaniry isan-karazany sy ny antimicrobial agents: famonoana alikaola 75%, fanadiovan-tànana, savony an-tanana miady amin'ny bakteria, fanasan-damba, fanasana vava, mpitsabo mpanadio tavoahangy zaza, famonoana otrikaina sy legioma, famonoana sakafo, 84 famonoana otrikaretina, otrikaretina hypochlorite , famonoana biby, biby tononkira, tongotr'ireo atleta, scavenger formaldehyde, vahaolana mahavelona amin'ny fitomboan'ny zavamaniry, rano ion ratsy
Ny vokatra ara-nofo ataon'ny olon-dehibe dia ao anatin'izany: ny lehilahy manemotra ny spray, ny lehilahy manemotra ny gel, ny lehilahy manala fanesorana, ny menaka fanosotra ho an'ny olon-dehibe, sns.
Ny vokatra famafana dia misy: soloina alikaola 75%, pad alikaola, soloina fanadiovana, solo-jaza, soloina fanadiovana an-dakozia, soloin'ny biby fiompy, soloin'ny sofa ao an-trano, soloina telefaona, soloina solomaso, soloina indostrialy, sns.
Ny vokatra vita amin'ny vatan-dambam-pandeha maro dia azo novokarina arakaraka ny takian'ny mpanjifa, manomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny 100 pcs ny fonosana samihafa, ny fampiasana indroa maina sy lena, famokarana aseptika, fa koa arakaraka ny takian'ny mpanjifa amin'ny famolavolana fanontana.
Manana ekipa matihanina vaovao izahay ary naondrana any amin'ny kontinanta rehetra ny vokatra. Manana fiaraha-miasa lalindalina amin'ireo orinasa iraisam-pirenena toa an'i Japon sy Eropa ary Etazonia koa izahay. Tongasoa ireo mpividy eran-tany mba hifandray aminay amin'ny fifampiraharahana amin'ny orinasa, hikatsaka fampandrosoana iraisana, ary hanao ezaka sy fandraisana anjara amin'ny antony mahasalama ny olona manerantany.
1.FAHITANA avo Antoka momba ny kalitaon'ny vokatra, miaraka amin'ny fahazoan-dàlana vokatra, hanomezana tolotra lafatra aorian'ny fivarotana.
2.FIRST-CLASS FITAOVANA Masinina fanoratana tavoahangy mandeha ho azy, milina fanidiana tavoahangy mandeha ho azy, milina famenoana rano mandeha ho azy, milina famonosana lamba famaohana mandeha ho azy, fitaovana fanaraha-maso mahazatra，Hamarino tsara ny kalitaon'ny vokatra.
3.FIVAROTANA MANAN-TANY Manana orinasa malaza eto an-toerana sy any ivelany izahay nanao sonia ny fiaraha-miasa.
SERVICE 4.24-ANDRO Manana serivisy an-tserasera 24 ora izahay, valiny haingana hanome anao ny traikefa nahafinaritra.
5.Ekipa PROFESSIONAL Natokana ho an'ny fifehezana kalitao henjana sy serivisy ho an'ny mpanjifa misaina, ny mpikambanay efa za-draharaha dia misy foana hiresaka momba ny zavatra takinao sy hiantohana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa.
Masinina fanoratana tavoahangy mandeha ho azy
Masinina fonosana servieta mando mandeha ho azy
Masinina fanidiana tavoahangy mandeha ho azy
Masinina mameno ranoka mandeha ho azy
FAMPANDROSOANA FENO FAHAMARINANA
Ny orinasa dia nahazo ny fahazoan-dàlana famokarana sy ny fametrahana ny vokatra amin'ny orinasa disinfection sinoa, ary nandalo ny fanamarinana rafitra fitantanana kalitao iraisam-pirenena ISO9001
Fitsapana ny vokatra laboratoara
Fitsapana vokatra atrikasa
Ny vokatray dia efa nandalo fanamarinana maro tao an-trano sy tany ivelany, ny akora rehetra dia voamarina amin'ny lenta.